आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२७ पुस २०७७ सोमबार, ११ जनवरी २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२७ पुस २०७७ सोमबार, ११ जनवरी २०२१)
२७ पुष २०७७, सोमबार ००:४८
श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ हेमन्त ऋतु प्रमादीनामक संवत्सर वि.सं. २०७७ पौष २७ गते तद् अनुसार सन् २०२१ जनवरी ११ तारिख सोमबार पौष कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि १३ः३५ पर चतुर्दशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र ८ः३७ पर मूल नक्षत्र वृद्धि योग ४ः१ पर ध्रुव योग भद्रा करण आनन्दादिमा पद्म योग चन्द्रमा बिहान ८ः३७ बजेसम्म वृश्चिक राशिमा त्यसपछि धनु राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः५८ मा र सूर्यास्त साँझ १७ः२६ मा हुनेछ । पृथ्वीजयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस ।
बृष – भागदौडमा वृद्धि हुनेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । विवाद आदिदेखि सचेत भइ अरुको भर नपरेर आफ्नै बल–विवेकले काम गर्नुहोला । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । सुख र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साह बढ्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ ।
कन्या – व्यस्तता र खर्च बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । यात्रा होला । सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ । कुनै पनि शारीरिक र आर्थिक जोखिममा नपर्नु उचित रहला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा लाग्नु बेस हुनेछ र सफलता पनि मिल्नेछ । इष्टमित सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । रसरागमा आकल्षण बढ्ला ।
वृश्चिक – आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखनप्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ ।
धनु – धर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति-पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने तथा ठगिने सम्भावना रहने छ । सोचीविचारी काम गर्नुहोला । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
सप्तरीको बोदे बरसाइन नगरपालिकामा तीन जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा आज एकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको बिसनपुरबाट बोदे बरसाइनतर्फ